Ukuthumela ngaphandle kwe-SVG kwi-Illustrator > UVielhuber uDavid
Ukuthumela ngaphandle kwe-SVG kwi-Illustrator09
Umsebenzi wokuthumela ngaphandle ngokubanzi unokufumaneka phantsi kwe " Ifayile> Ukuthumela ngaphandle> Ukuthumela ngaphandle njenge ... ". Okokugqibela, khetha " SVG (* .SVG) " njengoluhlobo lwefayile. Ukuba awufuni kutyala iindawo ezingafihliyo kwaye uthathe indawo yokuzoba, jonga " Sebenzisa indawo zokuzoba ", kungenjalo akunjalo. Kwidayalog elandelayo ukhetha ezi ndlela zilandelayo:
Ukuba awonelisekanga linqanaba leenkcukacha zendlela kwisiphumo, ngokuthe ngcembe ukwandisa iindawo zokugqibela ziye ku-3 okanye ku-4.
Kuya kuba nomdla xa ufakele iimaski zokunqunyulwa kwifayile ye vector. Oku kunokupheliswa (oku kukhokelela kwakhona kubungakanani obuncinci befayile kunye nokwanda kokuhambelana xa usebenzisa izixhobo zokuprinta ezinje ngedompdf ).
Zimbini iindlela ezaziwayo kwi-Illustrator: Okokuqala, phawula zonke izinto nge-CTRL + A kwaye ukhethe " Into> Nciphisa ukungafihli ... ". Emva koko ususe iimaski zokunqunyulwa esele zikhona nge " Into> yokuVala iMaski> Guqula umva ". Ukuba ayisebenzi, yenza oku kulandelayo endaweni yamanyathelo amabini okugqibela: Kuqala khetha " Into> Guqula ...> Kulungile " kwaye ukhethe ukhetho " lokususa indawo edlulayo " kwidayalog yePathfinder.:
I-SVG yokugqibela inokuphinda ilungiselelwe ngakumbi ngezixhobo ezinje nge- svgo (kwilayini yomyalelo okanye kwi- GUI yewebhu ).